October 2013 ~ Myanmar Online News
6:32 PM ရသ No comments
7:23 AM သတင်းများစုစည်းမှု No comments
ဘုရားဝင်းနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်း များတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် လုပ်ငန်းများကို စာရင်းကောက်ယူမည်
မန္တလေးတိုင်းအတွင်း သိမ်းဆည်းခံ လယ်မြေ ၅၄ မှု နှစ်လအတွင်း ဖြေရှင်းပေးမည်ဟုဆို
ရွာတန်းရှည် ရေတားတမံ ကျိုးကျပါက လယ်ယာမြေဧက ၆၀၀၀ နီးပါး ပျက်စီးမည်ဟုဆို
မန္တလေး ဟိုတယ်အခန်းခများ တိုးမည်မဟုတ်ဟုဆို
နယ်စပ် ခွဲထွက်ရေးသမားများကို နှိမ်နင်းရန် အိန္ဒိယ ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်နှင့် မြန်မာအစိုးရ ဆွေးနွေးမည်
ကုမ္ပဏီများ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် မတည်ငွေရင်းနှင့် ကနဦး ထည့်ဝင်ရမည့် ပမာဏသတ်မှတ်ချက် ပယ်ဖျက်
သမဝါယမ တာဝန်ရှိသူများ၊ မိသားစုနှင့် ဆွေမျိုးများကို ချေးငွေ ထုတ်ပေးခြင်း မပြုရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တင်
ကလေးကြိုက် နာမည်ကျော် ကာတွန်းများစွာ ရေးဆွဲခဲ့သူ ကာတွန်းဆရာကြီး ဦးအောင်ရှိန် ကွယ်လွန်
3:35 AM သတင်းများစုစည်းမှု No comments
2:59 AM သတင်းများစုစည်းမှု No comments
မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားမှုများစိစစ်ရန် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်က ၀န်ထမ်းတစ်ဦးခန့်အပ်
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အမေရိကန်၏ချဉ်းကပ်မှုကို ၀ါရှင်တန်အခြေစိုက် ဖောင်ဒေးရှင်း တစ်ခုကဝေဖန်
တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်ရပ် လက်မှတ်ထိုးရန် အစိုးရရေးဆွဲသည့်မူကြမ်းနှင့် UNFC မူကြမ်း ရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကွဲပြားနေဟုဆို
တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသောယာဉ် ဟုတ်၊ မဟုတ် လာရောက်စစ်ဆေးရန် ယာဉ်သစ်ဝယ်ထားသူများကို ကညန ပြော
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခတိုးမြှင့်လိုက်ခြင်း လတ်တလောတွင် ပြန်လည်ဖြေလျှော့ရန်မရှိဟု ၀န်ကြီးပြော
7:48 AM သတင်းများစုစည်းမှု No comments
မီနီဆလွန်း ၃၀၀ ကျော် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ထပ်ထုတ်မည်
SEA Games တွင် ပါဝင်မည့် ချင်းလူငယ်နှစ်ဦး ပျောက်ဆုံးဟုဆို
ဟံသာဝတီအဝိုင်း အနီးတွင် ရဲလုံခြုံရေး ယာဉ်နှစ်စင်း အတိုက်ခံရ
အိန္ဒိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) မြန်မာနိုင်ငံရောက်ရှိ
နဖူးတွင် ဓားမြှောင်တစ်ဆုံး ထိုးသွင်းခံရသူ အမျိုးသမီး အသက်မသေ
နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့ The Voice လွှတ်တော်သတင်းထောက် ရိုက်နှက်ခံရ
‘ဇ’ အထူးမြို့ပတ်ရထား နိုဝင်ဘာ ၁ ရက် စတင်ပြေးဆွဲမည်
မဟာဓာတ်အားလိုင်း ပျက်ကျမှုကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်
သံလွင်မြစ်ပေါ် ဆောက်မည့် ရေကာတာများကြောင့် ထိခိုက်နိုင်မှုများ သမ္မတနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပေးပို့မည်
6:59 AM သတင်းများစုစည်းမှု No comments
လေဟာပြင်ဈေးနေရာတွင် ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်အပါအ၀င် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်မည်
နိုင်ငံတကာ အထည်အလိပ်နှင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြပွဲ ကျင်းပမည်
ဝေဖန်မှုများရှိနေသည့် အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း ရုပ်သိမ်းရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆုံးဖြတ်
ခွင့်ပြုချက်ရ အရက်ချက်စက်ရုံများ ဖြစ်သလိုထုတ်လုပ်နေ
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဘာသာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်း ဆွေးနွေး
စစ်တပ်၏ အခွင့်ထူးခံအခြေအနေမရှိအောင် အခြေခံဥပဒေ မလွဲမသွေပြင်ရမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထပ်မံပြော
မြို့ကြီးငါးမြို့တွင် စံချိန်ကျိုးမိုးရွာသွန်းခြင်းသည် သမိုင်းတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်
ပုဂံညောင်ဦးရှိ နာမည်ကြီးဘုရားများတွင် လုံခြုံရေးကင်မရာ တိုးချဲ့တပ်ဆင်
ထိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့ အသေးစား ၊အလတ်စား လုပ်ငန်းရှင်များ ဦးဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လေ့လာမည်
အိန္ဒိယတပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်
ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးအပေါ် အစိုးရတာဝန်ယူမှု မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်မည်ဟုကတိပြု
နိုင်ငံခြားသားပိုင်မြေအဖြစ် အမည်ပေါက်ခဲ့သည့် ရန်ကုန်မြို့ရှိမြေများတွင် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ၁၉၀ ခန့် ဆောက်ရန် တင်ပြထား
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ Doing Business အစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာ ပထမဆုံးအကြိမ် ပါဝင်
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းအကြောင်း သမိုင်းပညာရှင်နှစ်ဦး စာတမ်းဖတ်မည်
တရားစီရင်ရေး အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းရန် အခြေခံဥပဒေပြင်သည့်အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ဟု တရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးပြော
လိုင်ဇာသို့ရောက်လာသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များ ကို ဒေသခံများကြိုဆို
ကာချုပ်နှင့် နယ်လုံဝန်ကြီးများ လုံခြုံရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆွေးနွေး
မြန်မာတက္ကသိုလ်များကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေး၍ လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးရန် ဗြိတိန်ပညာရှင်များ အကြံပြု
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စည်းမျဉ်းဥပဒေများ၏ အညွှန်းကိန်းအများစုကျဆင်း
သံလွင်မြစ် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအနီး တိုက်ပွဲများကြောင့် ဒုက္ခသည် တစ်သိန်းလေးသောင်းကျော်ရှိခဲ့ဟုဆို
1:29 AM အနုပညာ No comments
၁၉၅၄ ခုနှစ် မယ်တက္ကသိုလ်
5:58 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
8:29 AM သတင်းများစုစည်းမှု No comments
ဗုံးပြဿနာကြောင့် ခရီးသွား ကုမ္ပဏီလေးခု ခရီးစဉ် ဖျက်သိမ်းဟုဆို
ထိုင်း ဘုရင့်ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးမည်
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တည်ဆောက်ရန် လယ်ဧက ၃၀၀ သိမ်း
သက်သေများကို ရုံးချိန်းအတွင်း မဖြစ်မနေ စစ်ဆေးရန် တိုင်းဒေသကြီး တရားသူကြီးချုပ် တိုက်တွန်း
မိတ္ထီလာပဋိပက္ခ ဖျက်ဆီး လုယက်ရန် ကြိုးပမ်းသူများကို ပြစ်ဒဏ်ချ
ဖြည့်စွက်ဘဏ္ဍာငွေ တောင်းခံရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေးခေ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများ နိုဝင်ဘာလမှစ၍ တိုးကောက်မည်မန္တလေး ချမ်းမြသာစည် လေဆိပ်ဟောင်း ဒီဇင်ဘာတွင် ခရီးစဉ်များ ပြန်ပြေးဆွဲမည်
ရှေးဟောင်းယာဉ် ကိုးစီးဖြင့် မြို့ ၁၃ မြို့သို့ လှည့်လည် သွားရောက်မည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်ထူးဆောင် ရောမနိုင်ငံသားဆု အီတလီ အစိုးရ ချီးမြှင့်
8:08 AM သတင်းများစုစည်းမှု No comments
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ၏ လိုင်ဇာထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲတွင် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအရ အပစ်ရပ်ရေး မူကြမ်းနှစ်ခုကို ညှိနှိုင်းပြီး တစ်ခုတည်းဖြစ်ရန် ဆွေးနွေးမည်
လိုင်ဇာမြို့၌ ပြုလုပ်မည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ ညီလာခံမှ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် အဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်မည် ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း KNU နှင့် RCSS ပူးတွဲကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
7:19 AM သတင်းများစုစည်းမှု No comments
6:41 AM သတင်းများစုစည်းမှု No comments
ယခုနှစ်တွင် ပုဂံဇုန်ဝင်ကြေး စံချိန်တင်ရရှိ
ရှားပါးကားဟောင်းယာဉ်တန်း နိုင်ငံတစ်ဝန်း ကီလို ၁၄၀၀ ကျော် ခရီး စတင်
ဆီးဂိမ်းအကြို ဖိတ်ခေါ်ဟော်ကီပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာ(က)အသင်း ဗိုလ်လုပွဲတက်
ဆီးဂိမ်းအတွက် 100 Plus နှင့် စီးတီးမတ် ရန်ပုံငွေပူးပေါင်းရှာဖွေမည်
ငြိမ်းချမ်းရေးမရမီ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒေသများတွင် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုသင့်ဟု အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကပြော
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂုဏ်ထူးဆောင်ရောမမြို့သားဘွဲ့ လက်ခံရယူပြီး ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့်တွေ့ဆုံ
ရခိုင်ပြည်နယ် လမ်းပြမြေပုံကြမ်း စတင်ရေးဆွဲ
မီတာခများ နိုဝင်ဘာတွင် စတင်တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည်
3:34 AM အထွေထွေ No comments
ဥစ္စာစောင့် တကယ်ရှိမရှိကတော့ ကျွန်တော်လည်းသေသေချာချာတော့ မပြောတတ်။ အရင်အပိုင်း ၁ ကတော့ကျွန်တော့် အမေရဲ့ ဆေးခန်းမှာ ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလေးကို ရေးထားတာ။ ခုအပိုင်းကတော့ ကျွန်တော့် အဖေရဲ့ ဇာတိမြို့ကလေးကန်ကြီးဒေါင့်မြို့က အကြောင်းလေး။
9:05 AM သတင်းများစုစည်းမှု No comments
နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွား
ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များ၊ လုံခြုံရေး ပြဿနာနှင့် စီးပွားရေး မတည်ငြိမ်မှု ဂယက်များကြားမှ မြန်မာဆီးဂိမ်းစ် ဘာလဲ . . . ဘယ်လဲ . . .
မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်ရှိ မောတောင်ဒေသအား မြို့အဆင့်တိုးမြှင့်ရန် စီစဉ်နေ
ရသင့်ရထိုက်သည့် အခွန်အခများကို ဖိဖိစီးစီး ကောက်ခံမှု အားနည်းပြီး သုံးစွဲသင့်သည့် ရန်ပုံငွေထက် ပိုမိုသုံးစွဲခြင်းတို့ကြောင့် တိုင်းပြည်၏ လိုငွေနှင့် ဂျီဒီပီ အချိုးမှာ ကျသင့်သလောက် မကျဆင်းဘဲ ရှိနေသည်ဟု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ထောက်ပြ
ပြည်ပမှ ဆေးဝါးတင်သွင်းမှု များပြားမှုတွင် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများနှင့် နယ်စပ်ဒေသများမှ အဆင့်မမီ ဆေးဝါးတင်သွင်းမှုများရှိ
တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်ပြန်သော စာရင်းအရ တစ်လအတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇ သန်းကျော် တန်ဖိုးရှိ သစ်တောထွက် ပစ္စည်းများကို ဇုန်ရှောင်ကွင်းလမ်းများမှ မှောင်ခိုတင်ပို့မှု ရှိခဲ့ကြောင်း သိရ
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် စီးပွားရေး အဆောက်အအုံများ စီမံကိန်းအတွက် စိတ်ဝင်စားသော ပြည်တွင်းနာမည်ကြီး ကုမ္ပဏီများ အပါအ၀င် ကုမ္ပဏီ ၁၇ ခု ရှိနေ
ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကျပ် ၁၀၃၂၄ သန်း ကူညီမှု အပါအ၀င် ပြည်ပအကူအညီများကို ဘတ်ဂျက်စာရင်းတွင် တိကျစွာ ဖော်ပြရန်လိုဟု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဆွေးနွေး
မန္တလေးတွင် ပြုလုပ်မည့် ဆီးဂိမ်းစ်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၈၀၀ ဖြင့် လုံခြုံရေး ရယူမည်ဖြစ်ပြီး မိုင်းရှာဖွေစက်များနှင့် Sniper သမားများ ပါဝင်မည်
မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ပုံတောင်ပုံညာ လမ်းကြောတွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု မကြာခဏဖြစ်
နှစ်လအတွင်း မြ၀တီနယ်စပ်မှ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား ၁၀၄၃ ဦး ၀င်ထွက်ခဲ့
7:32 AM သတင်းများစုစည်းမှု No comments
တည်ငြိမ်အာမခံရှိမယ့် ဘဏ်စနစ် ပေါ်ပေါက်ရေး
ဒေါ်စု အီတလီခရီးစဉ်အတွင်း ပုပ်ေရဟန်းမင်းကြီးနဲ့ တွေ့ ဆုံမည်
7:44 PM အထွေထွေ No comments
လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ လိုက်နာရမယ့် ဆက်ဆံရေးဥပဒေသ ၃ ရပ်ရှိပါတယ်... အဲ့ဒါတွေကတော့
၃) မထိန်းနိုင်တဲ့ ကတိတွေမပေးဖို့ တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်...
လိမ်လည်ပြောဆိုခြင်းဆိုရာမှာ မရှိတာကို အရှိထင်လာအောင်... မဟုတ်တာကို အဟုတ်ထင်အောင်ပြောတာတွေပါသလို ရှိတာကို မရှိဘူးထင်အောင်... ဟုတ်တာကို မဟုတ်ဘူးထင်အောင်ပြောဆိုတာမျိုးတွေလည်း အကျုံးဝင်ပါတယ်...
လိမ်လည်ပြောဆိုတဲ့ သူတွေဟာ ရိုးသားမှုမရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်... ရိုးသားမှုမရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ ဘယ်လိုမှ တာရှည်မခံနိုင်ပါဘူး... လိမ်လိုက်တဲ့ ညာလိုက်တဲ့ခဏမှာ တစ်ဖက်လူက ယုံသွားနိုင်ပေမဲ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ အမှန်ကို ပြန်သိသွားမှာပါပဲ....
ဒါကြောင့် လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ လိမ်လည်ပြောဆိုခြင်း မပြုဘဲ ရိုးသားမှုအရင်းခံပြီး ပြောဆိုဆက်ဆံမှသာ ရေရှည်ခိုင်မာတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးတည်ဆောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်...
ရိုးသားတဲ့ စိတ်အရင်းခံနဲ့ မိမိအခြေအနေမှန်ကို မဖုံးမကွယ်ဘဲ အသိပေးလိုက်တာက
ရေရှည်အတွက်ပိုကောင်းပါတယ်...ကိုယ့်မှာမရှိတဲ့အရာတွေကို ရှိသလိုလုပ်ပြီး လိမ်ညာဆက်ဆံနေမယ်ဆိုရင် အမှန်ကိုသိသွားတာနဲ့ ကိုယ့်ကိုရှောင်ဖယ်သွားမှာသေချာပါတယ်...
ရိုးသားမှုထက်ကောင်းတဲ့ အဆင်တန်ဆာဆိုတာမရှိပါဘူး... ရိုးသားတဲ့အတွက် ရှက်စရာလည်းမလိုပါဘူး... ကိုယ့်လက်ရှိအခြေအနေကို လက်မခံနိုင်တဲ့သူတွေဟာ ရေရှည်အတွက်လည်း
ကိုယ့်အပေါ်သဘောထားမှန်မှန်နဲ့ ဆက်ဆံသွားမယ့်သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး... သင့်ရိုးသားမှုရဲ့ တန်ဖိုးကို သိမြင်နားလည်သူတွေဟာ သင့်ကိုရွေးချယ်ကြပါလိမ့်မယ်...
သင့်ကိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအဖြစ် ရွေးချယ်တာဟာ သင့်အပိုင်းမဟုတ်ပါဘူး... ရိုးသားမှုအရင်းခံနဲ့ မလိမ်မညာဘဲ ပြောဆိုဆက်ဆံဖို့ကသာ သင့်တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်... ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကျေရင် ဆက်ဆံရေးမှာ အောင်မြင်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်...
လိမ်လည်လှည့်စားခြင်းဆိုတာကလည်း လိမ်လည်ပြောဆိုခြင်းကို အဆင့်မြင့်မြင့်လုပ်ဆောင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်... လိမ်လည်လှည့်စားတဲ့နေရာမှာ စကားလုံးတွေနဲ့ ပြောဆိုတာမျိုးပါချင်မှပါ
ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်လူကို မိမိလိုချင်တဲ့အခြေအနေအတွင်း ရောက်ရှိသွားအောင် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြုလုပ်လိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်... လိမ်လည်ပြောဆိုတာကို လုံ့လစိုက်ထုတ်စရာ သိပ်မလိုဘဲ လုပ်ဆောင်နိုင်ပေမဲ့ လိမ်လည်လှည့်စားတဲ့နေရာမှာတော့ လုံ့လစိုက်ထုတ်ရပါတယ်...
ဒါကြောင့်လည်း လှည့်စားခံရတဲ့သူတွေဟာ ပိုပြီးယုံကြည်သွားတတ်ကြပါတယ်... ဒါပေမဲ့
လိမ်လည်တယ် လှည့်စားတယ်လို့ဆိုကတည်းက လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ ကင်းကွာနေတာဖြစ်ပါတယ်... ကိုယ်လိုချင်တဲ့အခြေအနေရအောင် လှည့်စားသိမ်းသွင်းနိုင်ပေမဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ လှည့်စားခံရသူကလည်း အခြေအနေမှန်ကို သိရှိသွားမှာပါပဲ...
ရေရှည်ခိုင်မာတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးကို လိုချင်တဲ့သူတွေဟာ လိမ်လည်လှည့်စားမှုတွေကို ဘယ်တော့မှ မလုပ်သင့်ပါဘူး... နောက်တစ်ချက်က အလှည့်စားခံရလိုက်တာကို သိတဲ့အခါ စိတ်ထဲမှာပိုပြီး ခံရခက်ပါတယ်... ဒီအချက်ဟာ ဆက်ဆံရေးလမ်းဆုံးကိုရောက်သွားအောင် ပြုလုပ်ပေးတဲ့ အဓိက အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်...
မိမိက ကောင်းမွန်တဲ့စေတနာနဲ့ လှည့်စားမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် တစ်ဖက်လူအနေနဲ့ နားလည်လက်ခံပေးနိုင်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူး... စေတနာမှန်ပေမဲ့လုပ်ဆောင်ချက်မှားနေရင် ထိရောက်သင့်သလောက် မထိရောက်တာကို သတိပြုသင့်ပါတယ်...
ဒါကြောင့် ရေရှည်ခိုင်မာတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုး တည်ဆောက်မယ့်သူတွေကြားမှာ ဘယ်လိုလိမ်ညာလှည့်စားမှုမျိုးကိုမှ မပြုလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကို အမြဲမပြတ်သတိပြုဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်...
ကတိဆိုတာ မိမိအနေနဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို တစ်စိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်ထိန်းသိမ်းသွားမယ်လို့ တိုင်တည်အသိပေးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်... မင်းမှာ သစ္စာ လူမှာကတိ ဆိုတဲ့ စကားလည်း ရှိပါတယ်...
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်တဲ့သူတွေဟာ သစ္စာတရားကို လက်ကိုင်ထားပြီး အုပ်ချုပ်စီမံရသလို လူမှုဝန်းကျင်မှာ ကျင်လည်နေကြရသူများအနေနဲ့ ကတိတစ်လုံးကို တန်ဖိုးထား ထိန်းသိမ်းသွားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်...
ကတိမတည်တဲ့သူ သစ္စာမရှိတဲ့သူတွေကို ဘယ်သူကမှ မယုံကြည်ကြပါဘူး... တစ်နပ်စားအကြံနဲ့ မထိန်းနိုင်တဲ့ကတိတွေပေးတတ်သူဆိုရင်တော့ အကုန်လုံးကဝေးဝေးကရှောင်ပါလိမ့်မယ်... လူသတင်းလူချင်းဆောင်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ မကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ဟာ အလျင်အမြန်ပျံ့နှံ့သွားနိုင်ပါတယ်... အထူးသဖြင့် မကောင်းသတင်းတွေကို ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန် လက်ဆင့်ကမ်းတတ်ကြပါတယ်...
ကတိတစ်ခုပေးပြီးပြီဆိုရင် အဲ့ဒီကတိကို အမြဲထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရပါမယ်... ကတိတည်တဲ့သူ သမာသမတ်ရှိတဲ့သူတွေကိုသာ လူတွေက ယုံကြည်ကြပါတယ်... နှစ်သက်လက်ခံကြပါတယ်... အပေါင်းအသင်းပြုလုပ်လိုကြပါတယ်...
ကိုယ်တကယ်မတတ်နိုင်တဲ့ မလုပ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကို တစ်ဖက်လူစိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေဖို့အတွက်နဲ့ အလွယ်တကူ ကတိမပေးလိုက်ပါနဲ့... မထိန်းနိုင်တဲ့ကတိပေးတာထက်စာရင် ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်လိုက်တာက သင့်အတွက် ရေရှည်မှာ ပိုကောင်းနိုင်ပါတယ်... ကတိမတည်သူ ဆိုတဲ့ အမည်းစက်မျိုးလည်း သင့်သမိုင်းမှာ ရေးထိုးစရာ အကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး...
ဒါကြောင့် ရေရှည်ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုး.. အောင်မြင်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကို လိုချင်တဲ့သူတွေဟာ ပေးထားတဲ့ကတိကို ထိန်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးသလို ကတိပေးမလွယ်ဖို့ မပေးနိုင်တဲ့ကတိတွေကိုမပေးဖို့လည်း အထူးအရေးကြီးပါတယ်...
ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များ၊ လုံခြုံရေး ပြဿနာနှင့် စီးပွားရေး မတည်ငြိမ်မှု ဂယက်များကြားမှ မြန်မာဆီးဂိမ်းစ် ဘာလဲ . . . ဘယ်လဲ . . .
6:05 PM အားကစား No comments
ဆီးဂိမ်းစ်ပွဲတော်အတွက် ပြင်ဆင်နေသည့် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိ အားကစားကွင်းအား တွေ့ရစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များ၊ လုံခြုံရေး ပြဿနာများနှင့် စီးပွားရေး မတည်ငြိမ်မှု ဂယက်များကြားမှ မကြာမီ ပြုလုပ်မည့် မြန်မာဆီးဂိမ်းစ်၏ အလားအလာနှင့် အောင်မြင်နိုင်မှုအပေါ် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ စိုးရိမ်မှုများနှင့် မေးခွန်းထုတ်လျက် ရှိနေကြသည်။
7:57 AM သတင်းများစုစည်းမှု No comments
စိုက်ပျိုးရေးအတွက် သုတေသနဖွံ့ဖြိုးအောင် ကူညီမည်ဟုဆို
ပြည်သူ့ဆန္ဒအရ အခြေခံဥပဒေပြင်ရန် အခြေအနေများနေသော်လည်း တိုင်းရင်းသားပါတီများ အသစ်ရေးဆွဲလို
ကချင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာ ဒေသအချို့တွင် ဂြိုဟ်တုဓာတ်ပုံအသုံးပြု၍ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမည်
မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်း တောင်ကြီးတွင် သွားရောက်လေ့ကျင့်မည်
7:51 AM သတင်းများစုစည်းမှု No comments
7:44 AM သတင်းများစုစည်းမှု No comments
ယခုနှစ်အတွင်း ဒလမြို့၏ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် အခြေအနေအား ကိုရီးယား နိုင်ငံသားများ အများဆုံး လာရောက်လေ့လာနေ
4:54 AM အနုပညာ No comments
ဗြိတိန်တွင် အခြေချ နေထိုင်နေရာမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာသည့် မော်ဒယ်လ်နှင့် သရုပ်ဆောင် စမိုင်းလ်နှင့် တွေ့ဆုံပြီး သူ၏ ပထမဆုံး တစ်ကိုယ်တော်စီးရီး New Me အကြောင်း၊ မိသားစု စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဖြစ်သည့် Y Talk ကုမ္ပဏီအကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အပြောင်းအလဲများအပေါ် သူ၏အမြင်တို့ကို The Voice က မေးမြန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Voiceးစမိုင်းလ်က အရင်တုန်းကဆို မော်ဒယ်လ်နဲ့ သရုပ်ဆောင်အဖြစ် အနုပညာလောကမှာ ကျင်လည်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ တေးစီးရီးခွေကို အရင်စလုပ် ဖြစ်ပုံလေး ပြောပြပေးပါဦး။
2:04 AM အထွေထွေ No comments
11:19 PM အထွေထွေ No comments
9:15 PM အထွေထွေ No comments
9:01 AM သတင်းများစုစည်းမှု No comments
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် တရားမ၀င် နေထိုင်သူများ ဖမ်းဆီးရေး စီမံချက်ကြောင့် ပြန်လည် ရောက်ရှိလာသော မြန်မာအလုပ်သမား ၁၇၀ ကျော်ကို သီတဂူ ဆရာတော်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ကြိုဆို
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမျိုးသုဉ်း သတ်ဖြတ်မှုများ မရှိကြောင်း ဘီဘီစီနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ငြင်းဆို
ဥရောပနိုင်ငံ လေးနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ချုပ်ဆိုထားသည့် လေကြောင်းသဘောတူ စာချုပ်အား ပြင်ဆင်ချုပ်ဆိုရန် တောင်းဆို
ပြည်သူနှင့် မီဒီယာက အပြုသဘော လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဝေဖန်မှုများ ရှိနေခြင်းသည် တာဝန်ခံမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း ဒုတိယသမ္မတ ပြောကြား
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ မည်သို့ပင် ဖိအားပေးစေကာမူ မိမိတို့ ချမှတ်ထားသည့် လမ်းကြောင်းပေါ် အခြေခံ၍သာ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက ပြောကြား